यसरी भए ‘अकुत’चिरञ्जीवी वाग्ले | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← राजा अंकित नोट साट्नु नपर्ने
मलेसियामा साँस्कृतिक धमाका २०६८ हुने →
यसरी भए ‘अकुत’चिरञ्जीवी वाग्ले
Posted on 17/03/2011 by डम्बर 'माइला' | टिप्पणी छोड्नुहोस्
चैत्र ३ – २०४८ जेठ १५ मा पहिलोचोटि मन्त्री बन्दा चिरञ्जीवी वाग्लेसँग जम्मा गोरखा बुँकोट-८ मा ६ रोपनी घरघडेरी र ५९ रोपनी खेतीयोग्य जग्गा थियो । चार महिनापछि सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा उनले ९० हजार रुपैयाँ र ९ तोला सुन देखाएका थिए (गोरखापत्र, २० भदौ २०४८) । पहिलो भ्रष्टाचारी राजनीतिकर्मी ठहरिएका वाग्लेसँग त्यतिबेला न काठमाडौं र चितवनमा घरघडेरी थिए,न त गाडी । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि उनी सात पटक मन्त्री भए र कमाइ पनि चुलिँदै गयो । २०५९ असोजमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘अमिल्दो र अस्वाभाविक’ उच्च जीवनस्तर यापन गरेको आशंकामा छानबिन अघि बढाएपछि उनको सम्पत्तिको फेहरिस्त सार्वजनिक हुन थाल्यो । त्यति बेलाकै मूल्यांकनमा उनीसँग ३ कराेड ४३ लाख रुपैयाँ भेटियो । सहरका जग्गाहरूको मूल्य बढेर यतिबेला अथाह भइसके । आयोग र विशेष अदालतले ‘उदारवादी’ हिसाब गरी उनको १ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको स्रोतलाई भने वैध ठहर्‍याए । बाँकीलाई भ्रष्टाचार ! यतिखेर सर्वाेच्च अदालतले उनीसँग २ करोड ३ लाख गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको ठहर गरेको छ । त्यसमा त्यत्ति नै जरिवाना थपी ४ करोड ६ लाख असुल्ने फैसला सुनाएको छ । साथै डेढ वर्ष जेल पनि !
नेपालको राजनीतिक भ्रष्टाचारको इतिहासमा यो ऐतिहासिक घटना हो । भ्रष्टाचार गरी सम्पत्ति थुपार्ने नेता कारबाहीमा परेको उदाहरण
थिएन । अनेक मन्त्रीका अनेक भ्रष्टाचार काण्ड र प्रकरण बाहिर आए पनि कोही पनि भ्रष्टाचारी प्रमाणित भएका थिएनन् ।
वाग्लेले आफूसँग भएका सम्पत्ति, छोरा-बुहारीले व्यापार व्यवसाय गरी कमाएको दाबी गर्दै आएका छन् । उनीसँग तीनवटा गाडी जुटे, राजधानीमा तीन तले घर बन्यो । काठमाडौं र चितवनमा जग्गा जोडिने क्रम बढ्यो । अनुसन्धानले भने उनका छोराको व्यवसायले सात वर्षमा जम्माजम्मी ३ लाख ६० हजार मात्रै नाफा गरेको देखाएको छ ।
त्यसो त, वाग्ले परिवारले अकुत सम्पत्तिलाई वैधानिक बनाउने अनेक प्रयास नगरेको होइन । २०५७ असार मसान्तसम्म आर्जित सम्पत्तिमा १० प्रतिशत कर तिरेमा स्रोत नखोज्ने व्यवस्था ल्याएको थियो । ‘मैलो धन’ लाई सेतो बनाउने मौका दिइएको थियो, ‘भीडीआईएस’ अर्थात् आयको स्वयं कर घोषणाका नाममा । सरकारको नीतिसँगै
वाग्लेका छोरा देवेन्द्रले ३ करोड ५९ लाख २४ हजार सम्पत्ति देखाउँदै ३५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ कर तिरेका थिए ।
कर तिरेपछि सबै ‘कागजात’ नष्ट गरेको दाबी वाग्ले परिवारले लियो र अनुसन्धानभन्दा बाहिर पार्नुपर्ने अडान पनि राख्यो । तर अख्तियार र अदालत दुवैले उनीहरूको जिकिरलाई अस्वीकार गरे ।
संसद्ले स्रोत खुल्न नसकेको सम्पत्ति स्वतः भ्रष्टाचारबाट आर्जित गरेको ठहर गर्ने कानुन २०५९ मा निर्माण गर्‍यो । यो कानुन अघि बढाउने अग्रपंक्तिमा उनै वाग्ले थिए । त्यो काम उनका लागि ‘आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो’ भएको छ । त्यतिखेर भ्रष्टाचार सम्बन्धमा कारबाही तथा छानबिन प्रभावकारी तुल्याउने कानुन पारित गर्न मन्त्रीका हैसियतमा वाग्ले सक्रिय थिए । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै त्यही हो, आफैंले बनाएको कानुनको पहिलो सिकार आफैं बन्नु ।
२०५९ वैशाखमा तत्कालीन गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का मुलुक बाहिर थिए । गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका वाग्लेले भ्रष्टाचारसम्बन्धी दुई विधेयक संसद्मा प्रस्ताव गर्ने अवसर पाएका थिए । २०५८ जेठ ८ मा विघटित प्रतिनिधिसभाको अन्तिम बैठकले यो विधेयक पारित गरेको थियो । भ्रष्टाचारविरुद्ध आममानिसले तिखो आलोचना गरेपछि नौ दिनकै बीचमा कानुन पारित भएको थियो, अनौठो लाग्ने गरी । नत्र एउटा विधेयक पारित हुन महिनौं लाग्ने गथ्र्याे ।
जतिबेला विधेयक पारित हुँदै थियो, त्यही दिन वाग्लेको अनुहारमा चमक हराएको थियो । प्रतिनिधिसभाले स्वयं कर घोषित रकम पनि छानबिनको दायरामा पार्ने प्रावधान पारित गरेको थियो । तर राष्ट्रिय सभामा त्यसलाई छानबिनको दायरामा नपार्ने गरी संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको थियो । वाग्ले राष्ट्रिय सभाको संशोधन ‘यथावत्’ पारित गर्ने पक्षमा थिए ।
मन्त्रीको इच्छाविपरीत राष्ट्रिय सभाबाट संशोधित प्रस्ताव अस्वीकृत गरी प्रतिनिधिसभाले ‘ऐतिहासिक स्वरूप’ प्रदर्शन गर्दै पारित गरेको थियो । मन्त्रीको अडान र राष्ट्रिय सभाको संशोधनको विपक्षमा उभिएको थियो, प्रतिनिधिसभाको सिंगो मत । वाग्ले ‘बञ्चरो’ आफैंमाथि लाग्न सक्ने अड्कल काटेर हो वा संयोग हो, मन्त्री हुँदाहुँदै पनि मतदानमा अनुपस्थित रहे ।
अरू पनि त्रस्त
सर्वाेच्च अदालतले वाग्लेले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेपछि विचाराधीन मुद्दाका अभियुक्तहरू फन्दामा पर्ने सम्भावना बढेको छ । अख्तियारले राजनीतिकर्मी र कर्मचारी गरी ६३ जनाले अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
हदम्याद गुज्रेका आधारमा सफाइ दिने विशेष अदालतको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण ठहर्‍याउँदै सर्वाेच्चले सफाइ पाइसकेका हकमा पनि मुद्दा केलाउने आदेश दिइसकेको छ । विशेष अदालतले ‘हदम्याद’ देखाई मुद्दाको तथ्यभित्रै प्रवेश नगरी पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीसहित पदीय दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जनको अभियोग लागेकाहरूको मुद्दा खारेज गरेको थियो । पदबाट बाहिरिएको एक वर्षभित्रै मुद्दा दायर गर्नुपर्ने ‘असान्दर्भिक’ तर्कका आधारमा सफाइ दिने नीति विशेषले लिएको थियो ।
वाग्लेझैं डेराबाट मन्त्री भएकाहरू र्फकंदा मार्बल बिछ्याएको आफ्नै तीनतले भवनमा सर्नेको संख्या अधिक
छ । तर अहिलेसम्म कारबाहीको फन्दामा पर्ने वाग्ले एकमात्र ‘अभागी’ बनेका छन् । विशेष अदालतले अस्वाभाविक सम्पत्तिवालाकै पक्षमा फैसला गर्न थालेपछि अख्तियारले धेरैलाई मुद्दा नचलाई अनुसन्धान ‘तामेली’ -थन्काउने) मा राख्ने नीति लिएको थियो ।
२०५८ मा गठित उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन न्यायिक आयोगले ६ सय २ जनाको सम्पत्तिमा ‘कैफियत’ देखाउँदै छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो । केही समय निकै उत्साहित तबरमा छानबिन अघि बढाए पनि पछि अख्तियार सुस्त भएको थियो ।
२०५८ फागुन २० मा शेरबहादुर देउवा सरकारले २०४८ यतामात्रै सरकारी सुविधा भोग गर्नेको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । पञ्चायती शासनकालमा सत्ता र शक्ति दुरुपयोग गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरू चोखिएका छन्, राणाहरू चोखिएझैं । त्यो घोषणापछि पञ्चायतकालमा अकुत कमाउनेहरू ‘साहूमहाजन’ भए र उनीहरूको सम्पत्ति पुख्र्याैली बन्यो, जसरी राज्यस्रोत आफैंमा केन्दि्रत गर्ने राणाका सम्पत्ति चोखा बने ।
पञ्चायत र प्रजातन्त्र दुवै कालमा सरकारी सम्पत्तिमा मस्ती गर्ने राप्रपाका नेतालाई अख्तियारले ‘पवित्र’ नै देख्यो, रवीन्द्रनाथ शर्माबाहेक । त्यतिबेला अख्तियारले एमाले र राप्रपाप्रति नरम नीति अपनाएको टिकाटिप्पणी नआएको होइन । २०५४ चैत ४ मा एमाले विभाजन हुँदा एकले अर्काको अधिक सम्पत्ति कमाएको पोल नखुलाएका पनि होइनन् । एमालेका नेताहरूले भनेका थिए, ‘आउँदा माग्ने जस्ता उनीहरू पार्टीमा बसेर धनाढ्य, सुविधाभोगी बनेर त्यो पचाउनलाई पार्टी फोरेर गएका
हुन् । सुरासुन्दरीको उपयोग गर्ने ती नवधनाढ्यहरूको विरोध भित्रै हुन थालेपछि पार्टी फोरेका हुन् ।’ यसरी पोलापोल हुँदा पनि एमालेका कुनै नेताविरुद्ध अख्तियारले छानबिन अघि बढाएन । माले एमालेमा विलय भएपछि एमाले केन्द्रीय समितिले ‘भ्रष्टाचारी भनेको’ मा आत्माआलोचना गर्‍यो । एमाले स्थायी कमिटीको २०५९ मंसिर ४ को बैठकले ‘वामदेव गौतममाथि लगाएको भ्रष्टाचारको आरोप फिर्ता लिने’ निर्णय गरेको थियो । दुनियाँकै इतिहासमा नदेखिने र नसुनिने शैली एमालेले देखायो, पार्टीले निर्णय गरेपछि ‘भ्रष्ट नेता’ हरू ‘पवित्र’ भए । गौतमले २०५७ मा भ्रष्टाचारी घोषणा गरी आफ्नो मानहानि गरेको आरोप लगाउँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेका थिए ।
भ्रष्ट राजनीतिकर्मीमाथि कारबाही नहुँदा त्यस्तै कार्य गर्न धेरैको मनोबल बढ्दै आएको छ ।
स्रोत खुलेको सम्पत्ति
१. चिरञ्जीवी वाग्लेको बैंक मौज्दात: ६ लाख ६६ हजार ९ सय ११ रुपैयाँ
२. उनकी पत्नी शान्तादेवी वाग्लेको नाममा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका वडा- ७ स्थित २७ लाख ५ हजार २ सय ९१ रुपैयाँ ६९ पैसा मूल्य बराबरको घर
३. त्यस घरभित्रका ७ लाख २७ हजार १ सय १२ रुपैयाँ बराबरका सरसामान
४. बुहारी अञ्जु शर्मा वाग्लेको नाममा सिद्धार्थ मल्टिपल इन्स्िटच्युटमा रहेको ८ लाख ४३ हजार ५ सय रुपैयाँ
५. शान्तादेवी र देवेन्द्रको नाममा रहेको जग्गा जमिन ६७ लाख ८२ हजार ८ सय ६९ रुपैयाँ
६. देवेन्द्रको नाममा बैंकमा रहेको मौज्दात १ करोड ९१ लाख ८३ हजार १ सय ४८ रुपैयाँ ३१ पैसामध्ये १ लाख ७७ हजार ५ सय ५७
७. चिरञ्जीवी वाग्लेको नाममा रहेको १ करोड ४० लाख १८ हजार १ सय ८४ रुपैयाँ बराबरको बा२च ९२९६ नम्बरको प्राडो गाडी
८. देवेन्द्रसमेतको संयुक्त नाममा रहेको बा३च ६३२० नम्बरको स्यान्ट्रो गाडीको देवेन्द्रको हिस्सा बराबरको ५ लाख रुपैयाँ
१. देवेन्द्रको नाममा बैंकमा रहेको मौज्दात १ करोड ९१ लाख ८३ हजार १ सय ४८ रुपैयाँ ३१ पैसामध्ये १ लाख ७७ हजार ५ सय ५७ रुपैयाँ कट्टा गर्दा बाँकी हुन आएको १ करोड ९० लाख ५ हजार ६ सय ४७ रुपैयाँ ७४ पैसा
२. देवेन्द्रको नाममा रहेको सेयर लगानी ५ लाख रुपैयाँ
३. देवेन्द्रकै नामको ८ लाख बराबरको बा३च ५५९१ नम्बरको
Posted by: DPR Source: ekantipur
This entry was posted in अपराध समाचार, अर्थतन्त्र. Bookmark the permalink.
पुराना पेजहरु महिना छान्नुहोस् नोभेम्बर 2021 (27) अक्टोबर 2021 (33) सेप्टेम्बर 2021 (37) अगस्ट 2021 (40) जुलाई 2021 (32) जुन 2021 (37) मे 2021 (32) अप्रील 2021 (19) मार्च 2021 (32) फ्रेवुअरी 2021 (37) जनवरी 2021 (31) डिसेम्बर 2020 (36) नोभेम्बर 2020 (26) अक्टोबर 2020 (4) सेप्टेम्बर 2020 (30) अगस्ट 2020 (26) जुलाई 2020 (26) जुन 2020 (11) मे 2020 (14) अप्रील 2020 (7) मार्च 2020 (30) फ्रेवुअरी 2020 (50) जनवरी 2020 (55) डिसेम्बर 2019 (69) नोभेम्बर 2019 (49) अक्टोबर 2019 (55) सेप्टेम्बर 2019 (59) अगस्ट 2019 (62) जुलाई 2019 (67) जुन 2019 (73) मे 2019 (46) अप्रील 2019 (14) मार्च 2019 (21) फ्रेवुअरी 2019 (55) जनवरी 2019 (67) डिसेम्बर 2018 (71) नोभेम्बर 2018 (38) अक्टोबर 2018 (28) सेप्टेम्बर 2018 (55) अगस्ट 2018 (52) जुलाई 2018 (63) जुन 2018 (77) मे 2018 (72) अप्रील 2018 (73) मार्च 2018 (58) फ्रेवुअरी 2018 (60) जनवरी 2018 (64) डिसेम्बर 2017 (75) नोभेम्बर 2017 (74) अक्टोबर 2017 (73) सेप्टेम्बर 2017 (71) अगस्ट 2017 (85) जुलाई 2017 (87) जुन 2017 (72) मे 2017 (47) अप्रील 2017 (66) मार्च 2017 (55) फ्रेवुअरी 2017 (53) जनवरी 2017 (54) डिसेम्बर 2016 (43) नोभेम्बर 2016 (81) अक्टोबर 2016 (73) सेप्टेम्बर 2016 (88) अगस्ट 2016 (89) जुलाई 2016 (86) जुन 2016 (77) मे 2016 (83) अप्रील 2016 (88) मार्च 2016 (114) फ्रेवुअरी 2016 (110) जनवरी 2016 (85) डिसेम्बर 2015 (81) नोभेम्बर 2015 (76) अक्टोबर 2015 (94) सेप्टेम्बर 2015 (95) अगस्ट 2015 (97) जुलाई 2015 (93) जुन 2015 (92) मे 2015 (100) अप्रील 2015 (106) मार्च 2015 (99) फ्रेवुअरी 2015 (60) जनवरी 2015 (58) डिसेम्बर 2014 (96) नोभेम्बर 2014 (106) अक्टोबर 2014 (110) सेप्टेम्बर 2014 (103) अगस्ट 2014 (96) जुलाई 2014 (83) जुन 2014 (95) मे 2014 (89) अप्रील 2014 (110) मार्च 2014 (103) फ्रेवुअरी 2014 (96) जनवरी 2014 (109) डिसेम्बर 2013 (100) नोभेम्बर 2013 (90) अक्टोबर 2013 (105) सेप्टेम्बर 2013 (134) अगस्ट 2013 (117) जुलाई 2013 (125) जुन 2013 (110) मे 2013 (121) अप्रील 2013 (130) मार्च 2013 (121) फ्रेवुअरी 2013 (108) जनवरी 2013 (124) डिसेम्बर 2012 (122) नोभेम्बर 2012 (121) अक्टोबर 2012 (119) सेप्टेम्बर 2012 (142) अगस्ट 2012 (159) जुलाई 2012 (161) जुन 2012 (164) मे 2012 (187) अप्रील 2012 (148) मार्च 2012 (177) फ्रेवुअरी 2012 (123) जनवरी 2012 (111) डिसेम्बर 2011 (137) नोभेम्बर 2011 (164) अक्टोबर 2011 (176) सेप्टेम्बर 2011 (174) अगस्ट 2011 (202) जुलाई 2011 (179) जुन 2011 (199) मे 2011 (229) अप्रील 2011 (245) मार्च 2011 (279) फ्रेवुअरी 2011 (250) जनवरी 2011 (252) डिसेम्बर 2010 (183) नोभेम्बर 2010 (138) अक्टोबर 2010 (220) सेप्टेम्बर 2010 (253) अगस्ट 2010 (390) जुलाई 2010 (256) जुन 2010 (210) मे 2010 (220) अप्रील 2010 (166) मार्च 2010 (229) फ्रेवुअरी 2010 (131) जनवरी 2010 (207) डिसेम्बर 2009 (152) नोभेम्बर 2009 (141) अक्टोबर 2009 (103) सेप्टेम्बर 2009 (92) अगस्ट 2009 (157) जुलाई 2009 (130) जुन 2009 (89) मे 2009 (172) अप्रील 2009 (62) मार्च 2009 (50) फ्रेवुअरी 2009 (25) जनवरी 2009 (48) डिसेम्बर 2008 (77) नोभेम्बर 2008 (62) अक्टोबर 2008 (25) सेप्टेम्बर 2008 (21) अगस्ट 2008 (3) जुलाई 2008 (2) जुन 2008 (2)
एमाले नेतृत्व चयनका लागि मतदान सम्पन्न
ओलीको सूची अस्वीकार गर्दै चारजनाले दिए उम्मेदवारी
एमाले अध्यक्षमा ओलीको उम्मेदवारी, रावलसँग प्रतिस्पर्धा हुने
एमाले महाधिवेशन : प्रतिनिधिको विवेकमा बन्धन
जाजरकोटमा बस दुर्घटना : ५ को मृत्यु, २७ जना घाइते
गैर आवासीय नेपाली संघ कुवेतले डिसेम्बर २४ मा भलिबल प्रतियोगिताको आयोजना गर्दै
सहमतिको आग्रह गर्दिनँ, चुनाव जित्नुपर्छ : ओली
कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमै कडा टक्कर
प्रतिनिधिमा युवाको बाहुल्य : देउवा र पौडेललाई चुनौती
चितवन महाधिवेशनले दिन खोजेको ५ सन्देश
तिहारको उपलक्ष्यमा कुवेतको मरुभूमीबाट बहिनीलाई चिट्ठी